Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Duleedka Magaalada Kismaayo. – Bogga Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Duleedka Magaalada Kismaayo.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen saldhigyada iyo fariisimada ciidamada Saliibiyadda Kenya iyo kuwa maamulka Ashahaado la dirirka Murtad Axmed Madoobe ay ka sameysteen duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada hoose.
Dagaalkan waxey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin si gaar ah ugu qaadeen deegaanka Cabdalle Biroole oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada Kismaayo halkaasi oo saldhig iyo fariisinba ay ka sameysteen ciidamada Saliibiyadda Kenya iyo kuwa maamulak gaala raaca Axmed Madoobe.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,waxeyna dadka deegaanka Xaqiijiyeen in dagaalkan uu ka mid yahay dagaaladii ugu cuslaay ee ka dhacay deegaanka waxeyna intaasi ku dareen iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo Saliibiyadda Kenya iyo maleeshiyaatka Kabo qaadka u ah lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Saacadihii lasoo dhaafay ayeey aheed markii ciidamada Kufaarta Afrikaanta gaari Taangi ah looga gubay weerar dhabba gal ah oo ka dhacay duleedka degmo Xeebeedka Baraawe ee gobalka Shabeelada Hoose.